Imibuzo evame ukubuzwa | IZigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Imibuzo emihlanu okufanele uyazi ngaphambi kokukhetha ngokushesha umkhiqizo ofanele kakhulu
Ngaphambi kokukhetha imikhiqizo yethu ehlanganisiwe ye-carbide, uma usitshela izidingo zakho kulezi zici ezinhlanu, ochwepheshe bethu bazokusikisela ngokushesha izinto nemikhiqizo efaneleke kakhulu kuwe. Lokhu kuzokongela kakhulu isikhathi nezindleko. Ngasikhathi sinye, izinto ezisetshenzisiwe ze-carbide namathuluzi kuzofezekisa nokusebenza okuhamba phambili kokusebenza.
Q: Ingabe ucubungula insimbi noma umsebenzi wokhuni? Yini impahla esetshenzisiwe?
A: Inkampani yethu inezinhlobo ezingaphezu kwezingu-30 zamamaki e-carbide ahlanganisiwe, futhi ibanga ngalinye linezimo zalo zokucubungula ezifanele kakhulu. Ngemuva kokubamba into yakho yokucubungula, ochwepheshe bethu bangafanisa ngokunembile izinto ezifanele kakhulu kuwe, Vumela okokusebenza kufinyelele ekusebenzeni okuhle kakhulu.
Q: Ingabe udinga ukuthenga izinto ze-tungsten carbide noma amathuluzi wokusika we-carbide?
A: Inkampani yethu ihlukaniswe izigaba ezimbili zemikhiqizo ngokuya ngefomu lomkhiqizo, izinto ze-carbide ezihlanganisiwe namathuluzi we-carbide aqinisiwe. Imikhiqizo yezinto ezibonakalayo ifaka phakathi izinduku ze-carbide ezihlanganisiwe, amapuleti e-carbide aqinisiwe, i-carbide yesikhunta futhi ifile futhi izikhala ezahlukahlukene ze-carbide ezihlanganisiwe, njll.
Amathuluzi e-carbide ikakhulukazi amathuluzi wokusika we-carbide asetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene. Ngemuva kokucacisa izidingo, sizoba nethimba lochwepheshe lokukunikeza insizakalo yamahora angu-24.
Q: Ngabe unezidingo ezikhethekile eziphakeme zokunemba kokusebenza kanye nemikhiqizo efanele?
A: Ngokuvamile, sicubungula ngokuvumelana nokubekezelelana okujwayelekile kwamazwe omhlaba, okungahlangabezana nezidingo zamakhasimende amaningi. Kodwa-ke, uma unezimfuneko ezikhethekile zokubekezelela okukhiqizwa komkhiqizo, sicela usazise kusengaphambili, ngoba amanani womkhiqizo nesikhathi sokulethwa kuzohluka.
Q: Yimuphi umkhiqizo nebanga le-carbide material oyisebenzisayo manje?
IMP: Uma ungahlinzeka ngohlobo lwe-carbide enosimende oyisebenzisayo manje, imininingwane mayelana nezakhiwo zamakhemikhali, izakhiwo zomzimba, ochwepheshe bethu bazokufanisa ngokushesha nangendlela efanele ukwaziswa okungcono kakhulu kuwe.
Q: Ukuzinza kwekhwalithi nesikhathi esiholayo
A: Inkampani yethu yinkampani ye-carbide eqinisekisiwe ekhiqiza kusuka ezintweni zokusetshenziswa ze-tungsten carbide kuya emikhiqizweni eqediwe yifektri yethu, ngakho-ke zonke izixhumanisi zokukhiqiza zilawulwa yithi uqobo. Inkampani yethu isebenza ngokuqinile ngokuya ngesitifiketi sekhwalithi ye-ISO2000, engaqinisekisa ukuzinza kwekhwalithi yomkhiqizo ngamunye. Imikhiqizo ejwayelekile ingathunyelwa kungakapheli izinsuku ezintathu, futhi imikhiqizo eyenziwe ngezifiso ingathunyelwa kungakapheli izinsuku ezingama-25.